Iindawo zokuchithela iimbadada zokuchithela iiNdawo zokuchithela iiNdawo zokuchithela iiNdawo zokuchithela iiNdawo zokuchithela iiNdawo zokuLwa iZibonelelo eziNtsha zeembadada ezicingwe ngokutsha zaseRoyal Bahamian
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iihotele kunye neeholide » Iindawo zokuchithela iimbadada zokuchithela iiNdawo zokuchithela iiNdawo zokuchithela iiNdawo zokuchithela iiNdawo zokuchithela iiNdawo zokuLwa iZibonelelo eziNtsha zeembadada ezicingwe ngokutsha zaseRoyal Bahamian
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Caribbean • Culinary • inkcubeko • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • Iindaba zeLuxury • Resorts • Imitshato yothando • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Iimbadada iRoyal Bahamian
Ukulandela inguqu yezigidi zeedola, iSandals Resorts International (SRI) ityhila izicwangciso namhlanje kwiresort yayo ehlaziyiweyo ngokupheleleyo e-Nassau, eBahamas, iSandals Royal Bahamian entsha. Idizayinelwe ukubhiyozela umoya ohamba lula we-Bahamas ngamava aphefumlelweyo asekhaya kunye nendlela ecingisisiweyo, yangoku yobumnandi, iinkokeli zothando kunye nezothando kwiSandals ziya kuphinda zivule ihotele yazo ephumelele ibhaso, i-spa kunye nesiqithi sabucala kwixesha lasebusika eliqala ngoJanuwari. 27, 2022.
Izicwangciso zeSanals Royal Bahamian ezicingisiswe ngokutsha ziye zasebenza phantse iminyaka emithathu.
Le ndawo yokuphumla ihlaziyiweyo iya kuphinda ivulwe ngeendawo zokuhlala ezitofotofo ezintsha, amava aphefumlelweyo alapha ekhaya, indawo yokutyela ephuculweyo, nokunye.
Uyilo olutsha luyinxalenye yesicwangciso esikhulu ngakumbi kumbutho wonke ukubonisa ngokuqinisekileyo iindawo ezikhethekileyo zeCaribbean.
“Sicofa ubunewunewu kwaye sithembele kumoya wokuhamba lula Bahamas ukuhambisa amava amangalisayo nayinyani njengoko sithanda ukuthi, yenza uthando lube lula," utshilo uSihlalo oLawulayo we-SRI uAdam Stewart. “Ukusuka kwilali entsha ngokupheleleyo yeevillas ezinemibala ye-pastel kunye neCoconut Grove, indawo yethu entsha yokuphumla yangaphandle kunye nendawo yokuzonwabisa ukuya kwisiqithi sethu esikude nonxweme esiguqulelwe ekubeni yindawo yokuzimela yothando, ngalo lonke ixesha, indawo nganye yokuchukunyiswa kweendwendwe kunye namava aquka le nto intle. indawo ekuyiwa kuyo. Asinakulinda ukwamkela iindwendwe ezibuyela eNassau nakwintsha Iimbadada zaseRoyal Bahamian. ”
Ngokutsho kwe-SRI uSihlalo oLawulayo uAdam Stewart, izicwangciso zeembadada ezihlaziyiweyo zaseRoyal Bahamian ziye zasebenza iminyaka ephantse ibe mithathu kwaye ziyinxalenye yesicwangciso esikhulu kakhulu kulo lonke umbutho ukubonisa ngokunyanisekileyo iindawo ezikhethekileyo zeCaribbean apho iiNdawo zokuchithela iiNdaba zisebenza kuyilo, imveliso. iminikelo kunye nesimbo senkonzo etofotofo.
Iphinde yacingisisa Kuphumelela Iimbadada zaseRoyal Bahamian ziya kubandakanya:
IiSuites eziNtsha zonke kunye neLali yeSiqithi
Iimbadada zaseRoyal Bahamian zinyusile uluhlu lwayo lweendawo zokuhlala ngokudityaniswa nophawu lomlambo iisuite ezisanda kuthiwa yiEast & West Bays, ngaphezulu kwama-200 amagumbi ahlaziywe ngokupheleleyo kunye neesuite kunye nezintsha zonke. Island Village. Ilali entsha enemibala ye-pastel yaphefumlelwa liziqithi zaseBahamian kwaye ibonakalisa i-butler style villas ethiywe ngesiqithi esise-Bahamas enedama labo labucala.
Ukongezwa okutsha kwipropati ICoconut Grove, Indawo yokuphumla ebanzi eyandisa i-Bahamian beach vibes ukuya kumbindi wendawo yokuphumla imini nobusuku. Igutyungelwe zintende ze coconut, isilungiselelo esitsha siqhayisa ngeendlela zokuhlala ze-chic, umculo ophilayo kunye nokuzonwabisa, iimbono ezingenakulinganiswa zolwandle kunye neelori ezi-3 zokutya ezintsha. Zonke iisandali 'okokuqala,' iindwendwe zingafumana isimuncumuncu okanye ikofu Iilekese n Tiings, zifake kwi-cuisine ye-Bahamian ephefumlelweyo yendawo kunye nokutya kwaselwandle okutsha UKumkanikazi waseCoco, okanye ukhethe i-Italian classic kwi Bahama Mamma Mia.
Indawo efihlakeleyo yeSiqithi sabucala
Iilwandle ezishiyiweyo kunye nezixhobo zekorale ezimibalabala zilindele kwisiqithi sabucala sendawo ekuchithelwa kuyo iiholide, IziNtshontsho I-Barefoot Cay. Izibini zinokuhamba ngesikhephe ukuya kwindawo efihlakeleyo yesiqithi kwaye bachithe imini bephinda bedibana kunxweme oluzolileyo olunebhari yaselwandle, indawo yokuhlala emnandi, ishawari yangaphandle kunye nevenkile yokutyela entsha, Indlu yaseAralia, ukunika ukutya kwaselwandle okutsha ukusuka kwisikhephe ukuya etafileni kunye nezibiliboco zokwenyani zaseCaribbean.
Ukungena kwangethuba kunye neSiko langokuhlwa leSintu
Ukufika kwangethuba, iSandals Royal Bahamian iyakwamkela ukungena kwangoko ngenkqubo yabo entsha, I-Breakaway. Ekufikeni kwakhe, umamkeli-zindwendwe ozinikeleyo uya kukhokelela iindwendwe kwindawo yokuphumla ene-cocktail yokutyikitya esandleni ukuze uhlaziye kwaye uqonde ngqo echibini ngelixa uhoye abanye. Ukutshona kwelanga, izibini zinokuthatha inxaxheba kwisithethe sokuvuthela isiko esithe samkele uthando kunye nethamsanqa. Isithethe sikhatshwa yirake kunye nomculo we-scrape kunye nee-cocktails zaseBahamian ezinomoya wolwandle.
Iinketho eziNtsha zokutyela
Iimbadada Royal Bahamian uya kwazisa zokutyela ezintlanu ezintsha xa ivula kobu busika kuquka Usiba kwi-French cuisine emnandi; Pub yemveli yaseBritani IPearl yoKumkanikazi; Kanoo ukutya okubhiyozela ummandla weCaribbean, Butch's Island Chop House kwi-steaks esikwe ngesandla, iifillet zentlanzi kunye nokutya kwaselwandle okulungiselelwe uku-odola kunye nebala elitsha le-sushi Soy.
Ukusuka kwi-grill ye-beachside ehambisa iibhega ezinomdla kunye neesaladi ezitsha ukuya kwivumba elimnandi leziqholo ezingaqhelekanga kunye nemiyobo yaseJapan eyosiweyo, i-Sandals yaseRoyal Bahamian entsha iya kuziqhayisa nge-13 yeenketho zokutya.
Ukuze ufunde ngakumbi kwaye ubhukishe indawo yokuhlala kwiSanals Royal Bahamian entsha, ndwendwela sandals.com/royal-bahamian/renovations.
Iindawo ekuchithelwa kuzo iiSandals® Resorts zibonelela ngothando ngabantu ababini abathandana kakhulu, amava eholide eNtofontofo ebandakanyiweyo eCaribbean. Izicwangciso ezili-15 ezimangalisayo zonxweme eJamaica, eAntigua, eSaint Lucia, eBahamas, eBarbados, eGrenada, kunye ne-16th Indawo eza kwiCuracao Spring 2022, iiSandals Resorts zibonelela ngokubandakanywa komgangatho ongaphezulu kwayo nayiphi na enye inkampani eplanethi. Utyikityo loLuthando lweNest Butler Suites® lokugqibela kubucala nakwinkonzo; iingcibi eziqeqeshwe liGuild of Professional English Butlers; iRed Lane Spa®; Indawo yokutyela ye-5-Star Global Gourmet ™, eqinisekisa ukuba utywala busengaphezulu, iwayini yeprimiyamu kunye neeresityu ezikhethekileyo ze-gourmet; Amaziko e-Aqua anesiqinisekiso se-PADI® kunye noqeqesho; I-Wi-Fi ekhawulezayo ukusuka elunxwemeni ukuya kwigumbi lokulala kunye neembadada ezenziwe ngeembadada zenzelwe iiSandals Resorts. Iindawo ekuchithelwa kuzo iiSandals Resorts ziqinisekisa iindwendwe ngoxolo lwengqondo ukusuka ekufikeni kwazo ukuya kumka nazo Iiprotocol zePlatinam zoCoceko, imilinganiselo yempilo kunye nokhuseleko eyongeziweyo yenkampani eyilelwe ukunika iindwendwe ukuzithemba okukhulu xa ziseholideyini kwiCaribbean. ISandals Resorts yinxalenye yosapho lweSandals Resorts International (SRI), eyasekwa ngongasekhoyo uGordon “Butch” Stewart, equka iiNdawo zokuchithela iiNdawo zokuchithela iilwandle kunye neyona nkampani iphambili yeCaribbean ekuchithelwa kuyo iiholide. Ngolwazi oluthe kratya malunga neSandals Resorts Luxury Included® umahluko, tyelela sandals.com. www.sandals.com.